Siday Ku Timid Sideeda Maarij. Maalinta Haweenka. W/Q: Cali Cabdi Coomay
Thursday 8th March 2018 11:45:23 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Sare
Siday Ku Timid Sideeda Maarij. Maalinta Haweenka. W/Q: Cali Cabdi Coomay Sannadkii 1857 kii bishii sadexaad sideedeedii waxa mudaharaaday dumar ka shaqaynayey magaalada NEW YORK ee dalka maraykan
Dumark badan ayaan waxba kala socon, taariikhda maalinta loogu magac daray sideeda maarij amma 08 MARCH. Hadii aad aragto maalin la dabaaldagayo wax lagama maarmaan ah, inay jirto sabab iyo ujeedo loo sameeyey, balse aanay ahayn wax si dabiici ah u yimid oo keliya.
Sannadkii 1857 kii bishii sadexaad sideedeediiwaxa mudaharaaday dumar ka shaqaynayey magaalada NEW YORK ee dalka maraykan, iyagoo ka cabanayey mushahar yari iyo culays xad-dhaaf ah, oo ka soo waajahay shaqada. Booliska magaalada NEW YORK ayaa xoog ku kala dareeriyey, aakhirkiina waxa istaagay mudaharaadkii. Isla maalintaasi dumarkii mudaharaaday waxay samaysteen urur u dooda xaqooda iyo mushahar yaraanta soo
Talo:Dumarka Somaliland hadday doonayaan inay ka doodaan ka qaybgalka siyaasada dalka ha samaystaan maalin ka duwan tan dumarka reer galbeedku samaysteen.
Saamayn Dhaqaale oo intee leeg ayay ku yelatay Somaliland isbadalada siyasadeed ee ka dhaca wadamada jaarka la ah W/Q: M